COVID-19 oo bilaabay in gobolada dalka uu ku faafo | Dhacdo
COVID-19 oo bilaabay in gobolada dalka uu ku faafo
Sida ku cad macluumaadkii ugu dambeeyay ee Wasaaradda Caafimaadka, xanuunsidaha COVID-19 ayaa gaaray goobo aanu muddooyinkii ugu dambeysay ka jirin.
Wasaaradda Caafimaadka oo ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka laga diiwaangeliyay ayaa xaqiijisay in 90 xaaladood oo cusub la diiwaangeliyay, ka dib markii xanuunka laga baaray 1,529 qof, afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeysay.
66 ka mid ah dadka xanuunka laga helay waxay ku sugan yihiin Magaalada Muqdisho, iyadoo 19 xaaladood laga diiwaangeliyay Somaliland, Hirshabelle oo 4 kiis laga xaqiijiyay iyo 1 kiis oo laga diiwaangeliyay Koonfur Galbeed.
Dadka xanuunka laga helay 49 ka mid ah waa rag, halka 41-ka kalena ay haween yihiin, waxaana xanuunka haatan ka bogsaday 11 qof.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa xaqiijsay in 2 qof xanuunka ugu geeriyootay dalka, afar iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay.
Tirada guud ee xanuunka laga helay dalka oo dhan ayaa gaartay 5,273 xaaladood, iyadoo 3,750 qof ka bogsadeen, halka 154 ay u geeriyootay.
Dhanka kale Foosiya Abiikar Nuur, Wasiirka Caafimaadka Somaliya oo caawa Warbaahinta Qaranka ka soo muuqatay ayaa markale ku celisay in xanuunka uu dalka ku soo laba kacleeyay.
Waxay sheegtay in xanuunka uu si weyn u faafayo, marka loo eeggo bay tiri tirakoob la sameeyay bishan February, isla-markaana ay soo badanayaan dadka COVID-19 ugu dhimanaya dalka.
Foosiya Abiikar ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqday inay ka foggaadaan goobaha leeskugu yimaado, inay afgashiga xirtaan marka ay shirarka ka qaybgalayaan iyo marka ay taggayaan meelaha gaadiidka dadweynaha laga raaco, isla-markaana ay nadaafadda ku dadaalaan.
Iyadoo xaaladaha ugu badan laga diiwaangelinayo Magaalada Muqdisho ayaa waxaa haddana jirin wax iska bedelay noloshii caadiga ee magaalada ka jirtay, goobaha dadka isugu yimaadaana weli sidoodii ayay u camiran yihiin, kamana jirto wax kala foggaansho ah.